(Video):Haweeney Somali ah oo meydkeeda laga helay Gurigeeda magaalada San Diego ee dalka Mareykanka. - NorSom News
(Video):Haweeney Somali ah oo meydkeeda laga helay Gurigeeda magaalada San Diego ee dalka Mareykanka.
Sida ay soo tabiyeen warbaahinta maxaliga ah ee magaalada magaalada San Diego ee dalka Mareykanka, meydka haweenay soomaali ah laga helay gurigeeda oo ku yaalla magaaladaas dhacda gobolka gobolka California wadanka Mareykanka.
Haweeneydan oo lagu magacaabo Muna Kuri, da’deedana lagu sheegay 36 sano jir ayaa warkeeda la waayey ilaa Sabtidii, waxaana markii danbe meykeeda laga helay isla gurigii ay ku nooleyd iyadoo dhaawacyo ka muuqdaan qeybta hore ee jirkeeda.
Halkan ka daawo muuqaalka warbixintan
Previous articleBBC: Soomaalida Norway oo cabsi ka qaba aqoonsiga baasaboorka soomaaliga ah
Next articleListhaug oo Denmark u socoto: Waxbaan kasoo baran.